Usuku lwakudala lwentente ngoku luyafumaneka kwiVenkile ye App | IPhone iindaba
Usuku lwakudala lwentente ngoku luyafumaneka kwiVenkile ye App
Ukuba uneminyaka embalwa ubudala, kwaye kwi-90s sele uyonwabele imiboniso yexesha, ngokuqinisekileyo uSuku lweTente yayiyenye yeentandokazi zakho. Ekuqaleni Yakhutshwa nguLucasArts ngo-1993 kwaye yayiqhubeka enye iklasikhi ebizwa ngokuba yiManiac Mansion. Usuku loMnquba lubuya emva kweminyaka engama-23 kuhlelo olwenziweyo oluthetha ngobugcisa obenziwe ngesandla, ngesisombululo esiphakamileyo kunye nesandi, umculo kunye neziphumo ezibuyiswe ngokupheleleyo ngokukodwa kule nguqulo.
Ukuba awuyonwabelanga lo mdlalo, uSuku lweNtente luyamangalisa ixesha lokuhamba oopopayi umdlalo weqonga Apho abahlobo abathathu kuya kufuneka basebenze kunye ukuthintela umnyhadala omfusa osele uguqukile ekuthatheni umhlaba. Abadlali banokutshintsha nangaliphi na ixesha phakathi kweendlela zeClassic kunye neeRastastered, kwaye baxube kwaye badibanise iaudiyo, iigrafiki, kunye nonxibelelwano ngendlela abathanda ngayo. Ukongeza, ugqirha wobugcisa ongumxholo ubandakanyiwe kwaye nengoma yezimvo evela kubenzi bemidlalo yentsusa yongezwa.
Usuku lwentente ephinde yagqitywa lixabiswe kwii-euro ezingama-4,99 kwiVenkile ye App kwaye ayinalo naluphi na uhlobo lokuthenga okanye iintengiso ngaphakathi kwesicelo. Ukuba sifuna ukonwabela ubungqingili bexesha kwakhona, sinokujonga iklasikhi iMonkey Island, enye yezona ndawo zintle zemizobo kwi-90s, njenge-saga yase-Indiana Jones.
Iinkcukacha zoMhla weTente
Uhlaziyo lokugqibela: 11-07-2016
Ubukhulu: 2,78 GB
Kulinganiselwa iminyaka emi-12 nangaphezulu.
Ifuna i-iOS 9.0 okanye kamva. Iyahambelana ne-iPhone, i-iPad kunye ne-iPod touch.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Usuku lwakudala lwentente ngoku luyafumaneka kwiVenkile ye App
Ingqwalaselo, i-Pokemon Go ifikelela ngokupheleleyo kwiiakhawunti zakho zikaGoogle
I-Apple Watch yeyona smartwatch ivelisa olona lonwabo